Q. Midoobe oo war kama danbeys ah ka soo saartay xiriirkii Saadaq Joon iyo Shabaab. | XAL DOON
Home NEWS Q. Midoobe oo war kama danbeys ah ka soo saartay xiriirkii Saadaq...
Q. Midoobe oo war kama danbeys ah ka soo saartay xiriirkii Saadaq Joon iyo Shabaab.
Qaramada Amaanka Qarramada Midoobey ayaa kulankoodii xalay ka sheeegay in wax cadeymo ah loo waayay dacwad ka dhan aheyd taliyaha ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir General Sadaq Cumar Xasan Saadaq John oo lagu soo eedeeyay in uu xiriir la leeyahay Xoogga hubaysan ee Al-shabaab.
Safiirka Shiinaha ee QM, Zhang Jun ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri “Waa mowqifkeena joogtada ah in cunaqabteenada noqdaan kuwa aan laga lahayn ujeedo gaar ah. Talalabo kasta oo guddiga ay qaadaan waa in looga dan leeyahay joogteynta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, kana fogaadan saameyn kasta oo xun oo ay ku yeelan karto horumarka nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed. Codsiyada sharciga ah ee ay sameeyaan Soomaalida waa in la siiyaan dareenka iyo tixgelinta ay mudan yihiin. Waxaan soo dhoweeneynaa sharaxaadda lagu sameeyey eedeymaha ka dhanka ah Jeneral Saadaq Omar Maxamed, taliyaha ciidamada booliska Gobolka Banaadir”
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliya iyo safiirka Turkiga oo arrimaha gobolka ka wada hadlay.
Sawirro: Arrin filan-waa ah oo maanta ka dhacday dekeda magaalada Hobyo.
Baarlamaanka Puntland oo xasaanadii ka qaaday 8 xildhibaan oo gudoomiyaha eedeyn u jeediyay.
Kenya oo baadi goobeysa askar uga maqan weerar Shabaab ku soo qaaday.
Madaxweyne Farmaajo oo xil u magacaabay Yuusuf Garaad Cumar.
Shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka magaalada Garoowe.